USean Spicer ekugcineni ukhahlela ngaphandle - abantu - Thumela RELAY
Accueil » ABANTU & LIFESTYLE U-Sean Spicer ekugcineni ukhahlela - abantu
USean Spicer ekugcineni ukhahlelwa - abantu
Ubusuku obunjani! Kube nomdlalo webhola likanobhutshuzwayo omkhulu phakathi kwama49ers namaSeahawks ngesikhathi esengeziwe (abakwaNiners abalahlekile, behlise umoya), kulandele isonto lesishiyagalolunye lomkhankaso wokusebenza wesonto lonke oqale ngemuva kwamahora we-21, ngaphezulu kwehora sekwedlule isikhathi . Lokhu kuhlanya kuqhubekile nokufakwa kukaJoey Fatone wodumo lwakwaNSYNC (nompetha wokugcina wesizini ye-DWTS 4) njengejaji lesivakashi elihlukanise ibhulukwe lakhe odabeni lokuqala. Ngokufanelekile, lezi zithandani eziyisithupha zacula izingoma ngamaqembu amantombazane namaqembu abafana.
Ngemuva kokuba usaziwayo ngamunye nozakwethu abaqeqeshiwe benze amaqhinga okudansa amabili, kwase kuyisikhathi sokukuqeda. Ekugcineni, uLauren Alaina noGleb Savchenko, kanye noSean Spicer noJenna Johnson (abasathatha isikhundla sikaLindsay Arnold) baqokwa njengababili bokugcina, futhi bekuya kubahluleli ukukhetha ukuthi ngubani ozosindiswa. UCarrie Ann Inaba noBruno Tonioli bakhetha uLauren noGleb, wabe uSean noJenna bethunyelwa ekhaya
Umgcini wephephandaba uTom Bergeron ubuze uSean ukuthi kukhona yini afuna ukukhuluma kuLindsay, obekhona ngemuva kokushona kukanina womyeni wakhe. USean uphendule wathi, “Ngiyakukhumbula. Ngifisa ukuthi ngenze kangcono. Ngiyabonga ngakho konke okwenzile. "
Ube esephawula, “Ngiyabonga kuwo wonke umuntu ongisekele. Ngibonga umndeni wami ngakho konke abakwenzile. Ngikuthandile ukuba kulo mbukiso. Ngiyabonga ngokungazisa. UNkulunkulu anibusise nonke. Iba nosuku oluhle lama-veterans. "
Amathathu amathathu ahamba phambili
Wonke umuntu ulethe ukusebenza okuhle kakhulu embukisweni wanamuhla, benza konke okusemandleni abo ukuya kuma-semifinal ngesonto elizayo.
Angiwunaki nakancane umsebenzi omangalisayo u-Ally Brooke noSasha Farber abawenza bobabili bohlelo lwabo. Ama-samba kumjikelezo weBoy Band nokusebenza kwawo kwejazi emjikelezweni weqembu lamantombazane ayemangalisa kakhulu. UCarrie Ann uthe "akukholeleki, akunaphutha," kusho iJaji eliyiJaji uLen Goodman, "inqubo enhle kakhulu," futhi uJoey uthe u-Ally noSasha benze "umsebenzi ongajwayelekile". Ngokuqondene nendlela yabo yejazi, u-Ally wamkhumbuza uPaula. U-Abdul, uCarrie Ann, uthe lo mdanso "usuphelele futhi," futhi uLen wengeza ngokuthi u-Ally wayenobuntu obukhazimulayo obukhonjiswa kulo mdanso. Akumangazi ukuthi i-samba ithola i-10 emine, ne-jazine ezine nge-10 ephelele. inothi ephelele ye-80 !! Abanye abaqhudelanayo bangenza kangcono ukuletha umdlalo wabo "A" ngesonto elizayo uma u-Ally noSasha beqhubeka nokudansa kuleli zinga.
Ithango likaHana Brown kanye no-Alan Bersten lalishisa, livutha, livusa indlela efanayo evela kumajaji. UBruno wayibiza ngokuthi "injabulo emsulwa engenziwanga" noJoey "kumnandi" futhi wayifingqa ngokuthi "umdanso omuhle kakhulu wobusuku kimi". Izikolo eziningi ze-9 kanye ne-Three 10 Reflect ukuvunyelwa kwamajaji kwe-39 Isamba
Ekugcineni, isimo sothando esakhiwa iViennese Waltz kaKel Mitchell noWitney Carson sasimangalisa. U-Len wacabanga ukuthi "kungukusebenza okumangazayo futhi okuhle" futhi uBruno wathi uKel wadansa "njengendoda ephelele, eshayela ngokushaya okulula". UCarrie Ann wahlatshwa umxhwele ikakhulukazi ukuthi uthathe ihlazo lomdanso wakhe wokuqala (ijuba le-paso) walilungisa ku-waltz. Manje, kukhombisa ukuthi ufuna ukunqoba. Isikolo sikaKel noWitney sale ndlela sasiyi-10 emine ye-40 ephelele.
Hhawu uNkulunkulu wami
Ngadumala ukuthi u-Emma Bunton (uSpice Girl Spice Baby) akakwazanga ukujoyina uJoey Fatone ekomitini lamajaji ngenxa yokuhlela izingxabano.
Ngokuqedwa kosaziwayo abanebutho labo abavotile ababenamavoti kuphela futhi mhlawumbe bengazange babuke nombukiso, ukujabulisa nobumnandi be-TND kungenzeka kutholakale. Ngifunde isiphakamiso sombukeli esishisiwe esingase sixazulule inkinga yomncintiswano wokuthandwa ngabantu abaningi. Ubuye waphakamisa ukuthi esikhundleni sokuthi amaphuzu amajaji abe yi-50% yamaphuzu wombhangqwana ngamunye nama-50% ukuvota, inqwaba yamajaji - yilawo awaziyo umdanso - yi-75% kanti ababukeli babalwa nama-25 %.
Angazi ngempela, kodwa kukhona okufanele akulungise okwenzeka ngesizini edlule kuphinde futhi lokhu. Ngaphandle kwalokho, umbukiso ungahle ukhanselwe ngoba abantu bazoyeka ukubuka.
Ngesonto elizayo kuzoba owamanqamu bese kuthi izithandani ezinhlanu kulo mjaho zibe namamaki amahle ngokusebenza kwazo. Kufanele kujabulise impela. Sizokubona ngesonto elizayo - qhubeka nokudansa!
Osaziwayo, abalingani, amajaji amajaji kuyo yonke imijikelezo ehlanganisiwe:
U-Ally & Sasha: UCarrie Ann, 10; Len, 10; UJoey Fatone, oneminyaka engu-10; Bruno, 10 = 40; I-2th Round: 10, 10, 10, 10 = 40, nge-80 ephelele
I-Bel & Witney: 8, 8, 9, 9 = 34; I-2th Round: 10, 10, 10, 10 = 40, nge-74 ephelele
UJames no-Emma: 9, 9, 9, 9 = 36; I-2th Round: 9, 8, 10, 9 = 36, nge-72 ephelele
UHana no-Alan: 8, 8, 8, 8 = 32; I-2th Round: 10, 9, 10, 10 = 39, nge-71 ephelele
I-Lauren ne-Gleb: 9, 9, 8, 8 = 34; I-2th Round: 9, 9, 9, 9 = 36, nge-70 ephelele
I-Sean neJenna: 7, 6, 7, 6 = 26; I-2th Round: 6, 6, 6, 6 = 24 ngenani eliphelele le-50 (iqedwe)
PHOTO. Umama ka-Nadia Roz okwesithathu: iklabishi lakhe le-cliché ngemuva kokubeletha